QIIMAYN: Wargeyska “Mirror” Oo Qiimayn Ku Sameeyay Bandhiga Ilaa Haatan Ee Saxeexa Ugu Wayn Oo Ay Kooxaha Ugu Waaweyn Premier League Ka Sameeyeen Suuqa, Yaa Qiimay Sarreeya Alisson Backer & Kepa? – GOOL24.NET
Wargeyska caanka ka ah gudaha dalka Ingiriiska ee Mirror gaar ahaan qaybtiisa kubadda cagta ayaa qiimayn buuxda lagaga sameeyay saxeexii ugu weynaa ee ay kooxaha ugu waaweyn Premier League ka samaysay suuqii xagaaga, Qiimayntan ayay ka qayb yihiin goolhayayasha dunida ugu qaalisan ee Alisson Backer iyo Kepa Arrizbalaga.
Iyadoo ilaa haatan la ciyaaray kaliya afar kulan haddana xiddigaha qaar ayaa durtaba jamaahiirtooda cusub tusay sabab ay ku dhoolacadeeyaan halka xiddigaha qaar ay durtaba muujiyeen bandhig falaagonimo ah oo ay durtaba ku noqdeen kuwo loo saadaaliyo inay ku fashilmayaan kooxaha ay xagaagii soo gaadheen.
Qiimayntan ayayna qayb ka ahayn xiddigo ilaa haatan si weyn iskugu muujiyey kooxahooda cusub oo ay kamid yihiin Jorginho, Naby Keita iyo Matteo Guendouzi maadaama oo xiddigahani ay meel dhexaad ka ahaayeen saxeexyada ay kooxahoodu sameeyeen.
FG: Qiimaynta xiddigahan ayaa ah mid gaadhsiisan ilaa darajada 10.
Fee : £26million
Walow uu wali ku dhibtoonayo sidii uu ku qancin lahaa tababaraha cusub ee kooxdiisa ee Unai Emery, Haddana Torreira ayaa ah saxeexa ugu weyn ee ay Gunners ka samaysay suuqii xagaaga, Torreira ayaa daqiiqadaha kooban ee uu kasoo muuqday Gunners waxa uu bandhigyo cajiib ah ka sameeyay khadka dhexe iyadoo jamaahiirta qaar ay dalbadeen in la galiyo booska Granit Xhaka.
Fee : £71.6million
Goolhayaha ugu qaalisan taariikhda kubadda cagta, Kepa ayaa beddel u noqday goolhaye Thibaut Courtois oo rumeeyay riyadiisii uu ugu biirayay Real Madrid, Goolhayahan 23 jirka ah ayaa qaab kalsooni leh uga soo dhisaya kubadda halka dambe walow uusan weli ciyaarin kulamo tijaabo dhab ah u noqda haddana dhawaan waxa uu heli doona kulamo waaweyn.
Fee : £66.8million
Kaddib bandhigyadii cabsida lahaa ee Loris Karius Liverpool ayaa ku qasbanaatay raadinta goolhaye cusub waxayna ugu dambayn bangiga u jabiyeen Alisson Becker, Becker ayaa qaab kalsooni leh ku bilawday horyaalka walow uu sabab u noqday goolkii laga dhaliyay kulankii Leicester City ee toddobaadkan goolkaas oo ah midka kaliya ee laga dhaliyay ilaa haatan.
Fee : £60million
Mahrez ayaa ugu dambayn kusoo biiray kooxda Pep Guardiola ee Manchester City balse waxa uu wali u baahan yahay inuu qabto shaqo weyn si uu kooxdiisa ugu helo boos joogto ah, Mahrez ayaan wax gool ama gool caawin ah samayn 181 daqiiqo oo uu ilaa haatan matalay Sky Blues.
Fee : £47million
Khadkan dhexe ee ree Brazil ayuu culays weyni ku saaranyahay kooxdiisa Manchester United maadaama oo uusan ilaa haatan muujin bandhig weyn oo qanciya jamaahiirta kooxda, 25 jirkan oo si joogto ah ugu soo bilaabanayay kulamadii hore ayaa kulankii ugu dambeeyay keydka u galay Marouane Fellaini waxaana hubaanti ah inuu u baahan doono wakhti uu ku saldhigto Old Trafford
waxa aad ka tagteen xidigii ugu fiicanaa ee seasonka la soo iibsado jorgihno